Ndokumbirawo Ushamwaridze Yako Kumhara Mapeji | Martech Zone
Ndokumbirawo ushamwaridze Yako Kumhara Mapeji
Mugovera, October 15, 2011 Chitatu, October 26, 2011 Douglas Karr
Isu tinogara takatarisira zviitiko zvinoenderana nevateereri vedu. Mademo ewebhu, kurodha pasi, webinar, podcast, kunyoreswa kwemusangano… tinoda kuwana izwi pane chero eavo anoita kunge akakosha. Chandinoramba ndichitsvaga ndichidzokororazve, hazvo, zvinhu zviviri zvakakosha zvinoita kuti zviome (kana kusabvira) kugovera iyo kumhara peji:
Hapana zvekugovana mabhatani - dambudziko rekutanga randinoramba ndichiwana hapana mabhaisikopo ekugovana pamapeji ekumhara. Peji yekumhara ndiyo inzvimbo yakakwana yekudyidzana kugovana! Kana ndiri kunyoresa kurodha pasi kana chiitiko, mikana ndeyekuti pamwe ndicho chinhu chandiri kuda kugovana netiweki yangu.
Hapana kutarisana nevanhu - kana iwe uchigovana chinongedzo paFacebook kana Google+, iyo system inoburitsa musoro, tsananguro uye kunyangwe mumiriri mufananidzo kubva kune rako peji. Kana iwe peji rakamakwa zvakanaka, ruzivo rwakagovaniswa runotaridzika. Kana isipo, inodhonza info kubva papeji izvo zvisingawanzo kuita.
Ndiri kuenda kunotora Eventbrite, sisitimu yandakamboshandisa yakati rebei munguva yakapfuura. Heano maitiro Eventbrite anoratidza chiitiko chiri kuuya cheiyo Musangano wababa 2.0 (munaKurume). Heano maitiro eiyo kuongorora kuchatarisa paFacebook:
Eventbrite inosanganisa mabhatani ekugovana zvakanaka uye inoshandisa iyo Vhura Girafu Protocol kuzadza ruzivo rwese rwakakodzera. Nehurombo, zvakadaro, Eventbrite haibvumire iwe kuseta iyo mufananidzo iwe waungade kune yako chiitiko. Panzvimbo iyoyo, ivo vanozadza iwo mufananidzo neayo yavo logo. Yuck!
Heinoi iyo pfupiso yekutarisa paGoogle +:
Nehurombo kune vagadziri vewebhu kwese kwese, Google haina kusarudza kutamba pamwe neiyo Open Graph Protocol uye pachinzvimbo, inoda yavo yega meta ruzivo pane peji sekutsanangurwa pane Google+ Bhatani peji (ona pasi pezasi pane kugadzirisa snippet). Nekuda kweizvozvo, iyo Eventbrite snippet inotaridzika inotyisa… kudhonza iyo yekutanga mufananidzo kubva peji uye zvimwe zvisina kurongeka zvinyorwa.
Zvichida, LinkedIn iri kushandisa iyo Open Graph Protocol zvakare, asi ini handisati ndanyatsoiona ichishanda. Ndinoiona ichidhonza mumufananidzo wakanaka dzimwe nguva, uye mimwe mifananidzo kubva kune ino saiti yakachengetwa zvachose. LinkedIn inokutendera iwe kugadzirisa zita uye tsananguro. Neimwe chikonzero zvinoita sekungodhonza zita resaiti zvisinei nezita rezita rakaiswa mune yakavhurika giragi tag.
Imwe katsamba kana iwe uri kushandisa WordPress kugadzira mapeji ekumhara. Ndakatambanudzira kuna Joost de Valk, uyo akagadzira chinoshamisa WordPress SEO plugin iyo inosanganisira yakavhurika graph graph uye ndokumutumira iye ruzivo rwunodiwa kuti uwedzere maGoogle meta tag zvakare. Ivo vanofanirwa kuitiswa munguva pfupi!
Yemagariro Midhiya yeiyo Basa Rakanetseka